शरिरका यी ६ ‘अंग’ ठूला हुने महिला कहिल्यै नछोड्नु ! – Saurahaonline.com
सौराहा अनलाइन | २०७७, २३ बैशाख मंगलवार
अर्कोको पति वा पत्नीलाई नराम्रो नजर लगाउँनु वा उसलाई पाउँने इच्छा गर्नु पापको श्रेणीमा राखिएको छ ।अर्काको सम्पति आफ्नो बनाउँने चाहाना राख्नु ।राम्रो कुरालाई बिर्सेर नराम्रो बाटो पछ्याउँनु पनि पा’प हो ।कुनै सोझो–सादा व्यक्तिलाई क’ष्ट दिनु, उसलाई नोक्सान पुर्याउँनु वा धन–सम्पति लु’ट्ने आदि गर्नु कुनै पनि हालमा माफिको योग्य नहुने बताइन्छ ।
कुनै पनि ग’र्भवती महिलालाई नराम्रो बचन लगाउँनु वा आफ्नो कुराले उसको चित्त दखाउँनु पा’प मानिन्छ ।
कसैको आत्मासम्मानलाई हानि पुर्याउँने नियतले झू’टो बोल्नु ‘छ’ल’को श्रेणीमा राखिएको छ ।
समाजमा कसैको सम्मानमाथि हानि पुर्याउँने नियतले वा उसको पछिबाट कुरा काट्ने वा अफवाह फैलाउनु पनि क्ष’मा दिन नसकिने पा’प हो ।
धर्मले नकारेको चीज खानु वा धर्म विपरित काम गर्नु कुनै पनि हालमा व्यक्तिका लागि स्वीकार्य हुँदैन।
बच्चा तथा महिला वा अरु कोही पनि कमजोर जीवलाई हिं’सा र असामाजिक कार्यमा संलग्न मानिसलाई पा’पको भागिदार मानिन्छ ।
ग’लत तरिकाले अर्कोको सम्पति ह’डप्नु, ब्राम्हण व मन्दिरको चीज चोर्नेलाई पनि पापको श्रेणीमा राखिएको छ ।
रातिमा निद्रा नलाग्ने समस्या : यसरी समाधान हुनसक्छ तपाईँको निद्रा नलाग्ने समस्या ! २०७७, १३ मंसिर शनिबार
म:म: धेरै खानुहुन्छ ? सावधान ! हुन सक्छ यस्तो समस्या २०७७, १३ मंसिर शनिबार
रामायण : भगवान रामका सेनाले नगरेको काम लोखर्केले यसरी पूरा गरेको थियो ! २०७७, १२ मंसिर शुक्रबार